Maxay tahay xiisadda kursiga xildhibaan ee ay Xasan iyo Shariif u tegayaan CADALE? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay xiisadda kursiga xildhibaan ee ay Xasan iyo Shariif u tegayaan...
Maxay tahay xiisadda kursiga xildhibaan ee ay Xasan iyo Shariif u tegayaan CADALE?
Cadale (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad goboleedka HirShabelle Cali Guudlaawe ayaa shalay gaaray degmada Cadale ee Gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen mas’uuliyiinta iyo Bulshada degmada.
Sida aan xogta ku helnay, safarka Madaxweyne Cali Guudlaawe ee degmada Cadale ayaa hordhac u ah safar ay maanta halkaas ku tegi doonaan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Sababta ay Madaxweynayaashii hore u tegayaan Cadale waxaa lagu sheegay inay xal u raadinayaan muran xooggan oo ka taagan kursi xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka Soomaaliya, kaasi oo ka mid ah kuraasta beesha Harti-Abgaal.
Kursiga muranka ka taagan yahay ayaa ah midka HOP141, waxaana hadda ku fadhiya wasiirkii hore ee amniga Maxamed Abuukar Isloow Ducaale, oo kasoo jeeda beesha Owbakar Gaabane ee Harti-Abgaal.
Si kastaba, kursigan ayaa waxaa sheeganaya beelaha Cabdalle Caroone iyo Habar Nugaale Caroone, oo sheegaya in beesha Owbakar aysan xaq u lahayn kursigan, ayna tahay in laga soo wareejiyo.
Beelaha kursiga sheeganaya ayaa waxay eedeynayaan Shariif Sheekh Axmed iyo Imaamka Mudullood Imaam Maxamed Yuusuf, oo ay sheegeen inay siiyeen beel aan xaq u laheyn, ayna tahay in lasoo celiyo.
Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh ayaa lagu warramayaa inay doonayaan in arrintan xal laga gaaro.
Accusations of favouritism emerge as Somalia polls enter week two
Asad Cabdullahi Mataan - August 3, 2021
Claims of favouritism have marred Somalia’s senate elections after outspoken opposition politicians were elbowed out of nomination lists in Jubbaland and South West states. Jubbaland...
U.S. steps up air strikes against al-Qaeda ally in Somalia
English August 3, 2021
Senator Ilyas statement on Upper House elections
English August 2, 2021
Somali PM attends Global Education Summit, meets UK Prime Minister Johnson
English July 30, 2021
‘A very dangerous precedent’: Democrats take aim at Biden’s Somalia airstrikes
English July 29, 2021
English July 25, 2021
Uhuru delivers warning to Somalia in border visit
English July 23, 2021
Somalia to iron out Gedo, Somaliland polls bumps
English July 18, 2021
Mending Kenya-Somalia bilateral ties
English July 15, 2021
English July 14, 2021
DP World says wins ruling against Djibouti’s port company
English July 13, 2021
English July 10, 2021
Ethiopia’s Abiy boasts of military might despite rebel gains
English July 5, 2021
Somalia’s military kills 15 al-Shabab terrorists
English July 4, 2021